Apple manapaka ny varotra sy ny fidiram-bola indray noho ny iPhone 7 | Vaovao momba ny gadget
Apple manapaka ny varotra sy ny fidiram-bola indray noho ny iPhone 7
Izahay dia tsy inona akory ary tsy ambany noho ny telovolana nisesy izay nianjeran'ny fivarotana iPhone, izay nisy fiatraikany tanteraka tamin'ny valim-bola nataon'i Apple. Omaly dia nanantena ny rehetra fa ny Cupertino dia hanambara ny fidinan'ny varotra vaovao, amin'ity indray mitoraka ity iPhone 7 ary ny iPhone 7 Plus amin'ny maha-mpitarika lehibe azy, saingy tena hafa ny fanambarana.
Ary izany tokoa Apple dia nanambara ny valiny ara-bola momba ny firaketana marina izay nitombo ny varotra iPhone. Ankoatr'izay, nandritra ny telovolana farany tamin'ny 2016 dia nahavita nametraka firaketana vaovao momba ny varotra sy ny fidiram-bola izy ireo.
Tim Cook, ny CEO an'ny orinasa paoma manaikitra, dia nanazava toy izao;
Faly izahay fa ny valim-panadinana krismasy nataontsika dia nahatonga ny ampaham-bola avo indrindra ho an'i Apple teo amin'ny tantarany, ary rakitsoratra maro no tapaka teny an-dàlana.
Namidy iPhones bebe kokoa noho ny teo aloha izahay ary nametraka firaketana fidiram-bola ho an'ny iPhone, Serivisy, Mac, ary Apple Watch.
sokajy Nahavita nandefa iPhones 78.3 tapitrisa i Apple, izay niteraka fidiram-bola $ 54.380 miliara. Tamin'io vanim-potoana io ihany tamin'ny taon-dasa, dia totalin'ny 74.8 tapitrisa iPhones no namidy ary nahazoana tombony $ 51.640 miliara. Iray amin'ireo mpandray anjara fototra, amin'ny resaka varotra, ny Apple Watch, izay tsy naseho ny tarehimarika momba ny varotra.
Toa miakatra indray ny masoandro any Cupertino, raha toa ka nandeha izy io ary toa izany, araka ny tenin'i Cook manokana fa ho tsara kokoa izay ho avy.
Ny vola azo avy amin'ny serivisy dia nitombo be tamin'ny taon-dasa, noho ny fandraketana ny asan'ny mpanjifa ao amin'ny App Store, ary tena faly izahay ny amin'ireo vokatra azonay eny an-dalana.
Gaga ve ianao amin'ny valim-bola navoakan'i Apple omaly?.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » About us » Apple manapaka ny varotra sy ny fidiram-bola indray noho ny iPhone 7
Lalao PlayStation Plus sy Xbox Live Gold maimaim-poana amin'ny Febroary 2017
Ny Cyberattacks dia nitombo 130% tamin'ny taon-dasa tany Espana